PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-04-15 - KUBHEDILE EBUHLENI BECHITHWA AMAJAJI
KUBHEDILE EBUHLENI BECHITHWA AMAJAJI
Amajaji ahlukane phakathi ekhipha isinqumo
Ilanga langeSonto - 2018-04-15 - Front Page - KNOWLEDGE SIMELANE
ABASETHEMBEZINHLE bajabule bavukwa ngumunyu bewina icala enkantolo enkulu yamaJaji emgungundlovu, bekhumbula imisebenzi yomholi wabo ongasekho inkosi uvela Muhle “Imisebeyelanga” Shembe abakholwa wukuthi ubenabo ngokomoya kuleli cala.
Ijaji umnu Isaac Madondo ufunde isinqumo sakhe yedwa kuqala esithe bobabili unyazilwezulu nemisebeyelanga baqokwa yinkosi uvimbeni Thingolwenkosazane Shembe ukuba ngabaholi - omunye waqokwa ngencwadi omunye waqokwa ngomlomo, labe selifunda isinqumo samajaji amabili abevumelana okungujaji Portia Poyo-dlwati nojaji Jerome Mnguni bona abakubeke kwacaca ukuthi bahambisana nesinqumo sejaji u-achmat Jappie elasikhipha ngonyaka wezi-2016, esathi ngempela uthingo lwayiqoka Imisebeyelanga ukuba ibe ngumholi wasebuhleni.
Ujaji Madondo uthe uma kukhona abangeneliswa yisinqumo banalo ilungelo lokwedlulisa icala.
Seliqedile ijaji ukwethula isinqumo abasebuhleni baphume ngokuthula enkantolo, kwathi ohlangothini lwabasethembezinhle kwasha ingoma neziqubulo ebeziphakamisa Imisebeyelanga noshembe. Abanye bebelokhu bebabaze amandla emisebeyelanga bethi yiyo ehamba nabo kule ndlela.
Ngaphandle kwenkantolo ummeli wonyazi, u-advocate Rajesh Chaudree, nabasizi bakhe ubehlanganisa amakhanda nomeluleki wezomthetho ebuhleni umnu Lizwi Ncwane okuthe uma bebuzwa YILANGA Langesonto ukuthi bazothatha siphi isinyathelo emuva kwalesi sinqumo, umnu Ncwane wathi basazodla amathambo engqondo bese benza isimemezelo kungekudala.
Ummeli wasethembezinhle umnu Trevor Nkosi yena uthe ubengenaluvalo kusukela ekuqaleni yize isinqumo sejaji umadondo sike sethusa ekuqaleni ngoba ubazi ukuthi ubufakazi obethulwa enkantolo enkulu yasethekwini babuqine njengetshe, obasebuhleni buntekenteke. Uthe uma beledlulisa icala abasebuhleni babalindele bazobaphikisa.
Amajaji amabili abeke lamaphuzu, athe avuna ngawo ijaji ujappie:
Ubufakazi benkosi umqoqi Ngcobo nobenkosi uqwabe abunasisekelo.
Ukuqokwa komuntu ngomlomo akwemukelekile kulezi zikha- thi zamanje ekubeni bukhona obencwadi obunesisindo - akusafani nangezikhathi zakudala.
Uma kwemukelwa obomlomo kusho ukuthi noma ngubani angavele afike asho noma yini yemukeleke ezinhlakeni zomthetho.
Ngosuku lomfihlo wothingo inkosi ungcobo yasebenzisa isikhundla sayo sokuba yinkosi ukumemezela unyazilwezulu njengomholi, hhayi ngoba kwakusho uthingo futhi yabe isizwile ngoMnu Chansey Sibisi ngayizolo ukuthi umnu Buthelezi uzomemezela igama lemisebeyelanga.
Umfelokazi wothingo, undlunkulu Joyce Shembe, wazisholo yena ukuthi ubengajwayele ukuba sendlini yomyeni wakhe uze waqala ukusondela endlini yakhe esegula kakhulu, ngakho ngeke abe nesiqiniseko sokuthi akufikanga muntu owathunywa wuthingo ngosuku lomhla ziyi-16 kundasa (March) 2011.
Incwadi yokuqoka umholi yabe iyiyo njengoba kwafakaza nochwepheshe bezandla abathathu. Futhi yahanjiswa kummeli uzwelabantu Buthelezi ngowayengunobhala jikelele webandla umnu Sibisi.
Ijaji umadondo lona belithe:
Ukuqokwa ngomlomo nakho kuyikho esikweni lesintu.
Ubufakazi benkosi ungcobo nobenkosi uqwabe bunesisindo ngoba bebesondelene kakhulu nothingo, sasingekho isidingo sokuba lwalungaze lugcizelele ukuthi ayomemezela ngosuku lomfihlo, kwabe kwanele uma selusho ngomlomo.
Incwadi yokuqoka umholi yabe inogcobho ngoba ayinalo usuku eyalothswa ngalo neyahlanganiswa ngalo futhi umnu Sibisi akayifundanga, wavele wayisayina nje wayihambisa.
Kungathiwa inkosi ungcobo yabhimba ngesikhathi yedlulisa izifiso zothingo uma ithi ikhuluma njengenkosi yamaqadi, ngeke kwathiwa yabe ibhozomela ngoba ivimba umnu Buthelezi ukuba angalimemezeli igama lemisebe.
Womathathu amajaji avumelene ngokuthi abasethembezinhle bakhokhe izindleko zesimangalo esabehlula lapho Imisebe yabe isola abasebuhleni ngokuthi bephula izimiso zenkantolo, bagcoba ngokusemthethweni unyazi egospel, emthwalume, eningizimu yekwaZulu-natal.
Isinqumo sejaji Jappie sokuthi abasebuhleni bakhokhe izindleko zecala nezabameli basemajajini bobabili sivuke sema ngezinyawo.
Njengoba Imisebeyelanga seyakhothama abasethembezinhle baholwa yinkosi uphinda “Inkanyeziyesithathu” Shembe, ebingekho enkantolo kanti nonyazi belungekho. Leli cala selidonse iminyaka eyisi-8 kungongaphansi nongaphezulu.
Uma kwenzeka abasebuhleni befuna ukwedlulisa isinqumo sangolwesihlanu kusazomele baqale bafake isicelo sokuba siyolalelwa yinkantolo ikhiphe usuku baphinde babeke amaphuzu aqinile azokwehluka kulawa abebedlulise ngawo isinqumo sikajaji Jappie.
Abasethembezinhle kuzomele baqale bathunyelelwe wona bawacubungule ngaphambi kokuba kuyiwe enkantolo, basho noma bayawaphikisa noma bahambisana nawo bese kuyiwa enkantolo ziyophikisana phambi kwejaji.
Uma ijaji leneliseka bayobe sebeludlulisela-ke icala liye enkantolo enkulu yokwedlulisa amacala, ebloemfontein. knowledge.simelane@ilanganews. co.za
KUSHE ingoma phakathi enkantolo enkulu yamajaji emgungundlovu ngolwesihlanu emuva kokuba isinqumo sivune bona abasethembezinhle.
BAJABULE bagiya baqephuza abasethembezinhle ngaphandle kwenkantolo enkulu yamajaji emgungundlouvu bewina icala ngolwesihlanu.
BAPHUME enkantolo bahlanganisa amakhanda nommeli wabo abasebuhleni emuva kokuchithwa kwesimangalo sabo sokudlulisa isinqumo sejaji u-achmat Jappie esavuna abasethembezinhle.
UJAJI Isaac Madondo oyiphini likamengameli wamajaji Kwazulu-natal nguye ofunde isinqumo sakhe nesamajaji amabili esigcine sivuna uhlangothi lwasethembezinhle.